PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - Kufufusa ingxabano kwi-Iron Duke noKadodia
Kufufusa ingxabano kwi-Iron Duke noKadodia
Indaba ingomgadli ongalibheki ipali
KUFUFUSA ingxabano phakathi kwe-Orlando Pirates neMaritzburg United ngomgadli weTeam of Choice okuvela ukuthi ujikiswa endleleni ebheke kwezikaMagebhula.
ILANGA lihabule ukuthi u-Irvin “Iron Duke” Khoza onguSihlalo weBucs ufake isicelo kuFarook “Ntshebe” Kadodia ophethe iTeam of Choice sokuthenga u-Evans Rusike ngo-R6 million.
La makilabhu azobhekana kowe-Absa Premiership kusasa ngoLwesihlanu ngo-20h00 eHarry Gwala Stadium, eMgungundlovu.
Kwenzeka lokhu nje, uWillard “Salt & Vinegar” Katsande oyinjini yeKaizer Chiefs usanda kutshela leli phephandaba ukuthi ubona uRusike engaba yisixazululo enkingeni yokuhlohla amagoli ebhekene neziMpofana.
ILANGA lithole ukuthi uKhoza ufuna uRusike azovala isikhala esivuleke kuhamba uTendai “Fire” Ndoro obengumgadli wezakhe ojoyine i-Al Faisaly FC yaseSaudi Arabia. IMaritzburg kuvela ukuthi ibisizimisele ngokudedelela iBucs lo mdlali ngo-R6 million. Nokho kuthiwa ingase ijike umqondo njengoba kunekilabhu yaseTurkey neyaseBelgium abeka u-R18 million.
Kuthiwa le mali iconsise amathe uKadodia kangangoba imenze wakhohlwa yiBucs wacabanga la makilabhu aseEurope.
Leli phephandaba lishayela uKadodia ngalolu daba, uthe: “Kangikaze nginqabe ukudayisa uRusike inkinga ekhona wukuthi la makilabhu okuthiwa makhulu afuna ukusixhaphaza asinike imali encane.
"Ngakha ikilabhu engifuna iwine inkomishi ngale sizini, iqede neligi isendaweni enhle, kangikwazi ukuvele ngidedele umdlali ngemali encane.
“Ngeke ngiwuthathe u-R2 mi- llion ngoRusike uma ngimdayisa kuleli ngingathatha u-R7 kuya ku-R8 million hhayi okungaphansi kwalokho. Kodwa-ke ngingakuqinisekisa ukuthi kunamakilabhu amabili athinte mina ngqo aseEurope afuna uRusike.
“Enye eyaseTurkey bese kuthi enye kube ngeyaseBelgium. Athembisa imali enhle ongeke uyinqabe kwawena uma ungumnikazi wekilabhu engenabo abaxhasi. Kodwa-ke sizobona ngokuvulwa kwewindi lokudayiselana ngabadlali ukuthi kwenzekani,” kusho uKadodia.
Kuzokhumbuleka ukuthi naphambilini lezi zikhulu zike zangabona ngaso linye kubangwa umgadli. IPirates ibifuna uCuthbert Malajila kodwa iMaritzburg yamdayisela iMamelodi Sundowns. Kuthiwa uKhoza ufike iMaritzburg isivele isivumelene neSundowns ngokudayiselana. Yize kunjalo kuthiwa uKhoza simcikile isenzo seMaritzburg.